BN VERTICAL AND HORIZONTAL CLOSED-DIE ROLLING MACHINE Axial mechiri emechi-anwụ Rolling igwe na-achịkwa PLC, kwadebe ihuenyo mmetụ, nwere ike nweta mgbanwe na akpaka ọrụ. Oru mmiri na mkpuchi mmanụ na isi rotary, ndụ ọrụ ogologo. Enweghị nrụgide ebulu na ọgba aghara mgbe ọ na-arụ ọrụ. Ngwaahịa ya dị oke mma, na-enwu gbaa ma dị ọcha, zuru oke. Ọ na-eji emepụta obere ọkpụrụkpụ ngwaahịa dịka imepụta gia, imepụta flange, were gabazie. BN AXIAL Emechiri-Anwụ na-ekpuchi igwe SPECIFICA ...
GZJY FULL HYDRAULIC FORGING MANIPULATOR Fulll-hydraulic drive, usoro hydraulic na-aga n'ihu ma nwee ezi uche; The n'ibu akụkụ nke imewe njikarịcha, ezi uche Ọdịdị na mfe; Ike dị elu nke ihe iji mee ngwa ngwa; Onye ọrụ-enyi na enyi imewe, ime ihe na mmezi mfe na mfe. Manual, ọkara akpaka, akpaka linkage na ibe ya bụrụ presses. AKW TKWỌ AKW TKWỌ: 1T 2T 3T 5T ​​8T 10T 15T 20T 30T 40T 50T gosiri ikike (KN) 10 20 30 50 80 100 150 200 300 400 500 Tong ...
ZDYJ-B IHU AKW .KWỌ AKWYKWỌ AHY
ZDYJ-B FREE agbaghara Hydraulic ada ada ZDYJ-B usoro, free ibe ya bụrụ, haịdrọlik pịa bụ iji maka ibe nke ígwè ihe nhazi technology, gụnyere billet ndinyanade mbịne, iwe, punching, ịnyịnya Ogwe reaming, mgbanwe, ike ike mbịne, ehulata, wdg. Okpokoro etiti TS okpukpu atọ nke okpukpu anọ, akụkụ nke fuselage, tankị mmanụ, ebe a na-agagharị agagharị na akụkụ ndị ọzọ na usoro draịịdrọlik, sistemụ eletriki, usoro mmanu, jikọtara ọnụ iji mejupụta ...